अब बन्ने सरकारलाई काम नगर्न कुनै बहाना हुने छैन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता अब बन्ने सरकारलाई काम नगर्न कुनै बहाना हुने छैन
अब बन्ने सरकारलाई काम नगर्न कुनै बहाना हुने छैन
रामेश्वर खनाल, पूर्व–अर्थसचिव
गत वैशाख र जेठमा स्थानीय तह तथा मङ्सिर १० र २१ मा सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपाल संविधानतः र कार्यान्वयनको हिसाबले पनि सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । मुलुक यतिबेला राष्ट्रिय सभा र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । यो परिवर्तनसँगै नेपालमा अब राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको, मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको भन्न थालिएको छ । के साँच्चिकै मुलुकमा राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएकै हो त ? स्थानीय तह, प्रदेश सङ्घको सञ्चालन कत्तिको खर्चिलो छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसरहरू केके छन् ? यसैको सेरोफेरोमा रहेर पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग आर्थिक अभियानका टीपी भुसालले गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन भएसँगै अब राजनीतिक सङ्क्रमण सकिएको र मुलुक आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्‍यो भनिँदै छ ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
अहिले प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक सङ्क्रमण सकियो भनेका छन् । तर, मेरो विचारमा मुलुकमा अझै पनि केही राजनीतिक मुद्दाहरू सतहमा छन् । सतहमा रहेका र संवेदनशील ठानिएका ती मुद्दाहरूको हकमा सम्बन्धित पक्ष केही लचकता देखाएर निर्वाचनमा आएको अवस्था हो । दुई चरणमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्नु परेको यथार्थ हामीसँग छ । समष्टिगत रूपमा भन्दा स्थानीय निर्वाचन ३ चरण र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २ चरण गरी ५ चरणमा यी निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । एउटा समूहले विरोध तथा प्रतिवाद गरेकै कारण स्थानीय तहको निर्वाचन त्यति सुखदचाहिँ रहेन । अन्तिम घडीमा देखाएको लचकताले निर्वाचन सम्पन्न भए पनि त्यो समूहको राजनीतिक कार्यसूची समाप्त भयो, उनीहरूले राखेका मागहरू सबै पूरा भए भन्ने होइन । त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने प्रमुख दलका नेताहरूले भनेजस्तो राजनीतिक सङ्क्रमण पूर्णरूपमा सकिएको छैन । उनीहरूले राखेका मागहरूको अवसान भएको छैन । अर्को, विप्लव समूहले बोकेका कतिपय मुद्दाहरू यस्ता छन्, जुन मुद्दाहरू लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पूरा गर्न सकिँदैन होला । यसरी हेर्दा सशस्त्र समूह र निःशस्त्र समूह यी दुवैका केही मुद्दाहरू बाँकी छन् । ती मुद्दाको समाधान गर्न सकिएन भने राजनीतिक सङ्क्रमण अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
यीे चुनौतीलाई समाधान गर्ने बाटाहरू के हुन सक्छन् त ?
यसमा स्पष्ट रूपमा दुई बाटाहरू छन् । अबको १ वर्षभित्रै मुलुक तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा गयो भने स्वाभाविक रूपमा जनमत त्यो पक्षसँग रहँदैन । जनमत गुमाइसकेपछि जतिसुकै शक्तिशाली मुद्दाहरू बोकेका समूहहरू भए पनि तिनीहरू परास्त हुन्छन्, शक्तिहीन हुन्छन् । अर्को कुरा, समाजले पनि सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका केही असन्तुष्टिहरूको राजनीतिक वार्ता र संवादकै माध्यमले समाधान खोज्दै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा सरकार गयो भने राजनीतिक सङ्क्रमण पूर्णरूपमा अन्त हुन सक्छ । यसका साथै बाहिर रहेका पक्षहरूका कतिपय मागहरू अमूर्त छन् । समाजलाई अग्रगमनमा लैजाने खालका मुद्दाहरू भए, दलहरूले वार्ताकै माध्यमबाट त्यसको समाधान खोज्नु पर्छ । तर, मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा लैजाने, अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने, मुलुकलाई एकदलीय तानाशाहीमा लैजाने, यो संविधान नै खारेज गर्ने खालका माग र मुद्दा छन् भने सरकार प्रतिकारमै जानु पर्छ ।
मुलुकलाई तीव्र गतिमा आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान अबको आर्थिक एजेण्डा र कार्यदिशा कस्तो हुनुपर्छ ?
राजनीतिक सङ्क्रमणको सानो हिस्सा, फिलिङ्गो नै भनौं, पूरै निमिट्यान्न नभए पनि अब सरकारलाई काम गर्न अवरोध छैन । किनभने २०५१ पछि अहिलेसम्मका सरकार हे¥यो भने हरेक सरकारले छोटो समय मात्र काम गर्न पाएको अवस्था रह्यो । राज्यका संरचना र नेतृत्वहरूमा स्थायित्व रहेन । यो कारणले गर्दा नेपालमा आर्थिक विकासका काम भएनन्, लगानीको वातावरण भएन, रोजगारी सृजना हुन सकेन र हुँदाहुँदा नेपालीहरू रोजगारीको लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था आयो । तर, अहिलेको निर्वाचनपछि अब मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ गयो भन्ने देखायो । अब त्यो स्थायित्वलाई दलहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्छन्, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । तर पनि स्थानीय तहको संरचनामा ५ वर्षसम्म नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । त्यहाँ उनीहरूले हामी यो वा त्यो कारणले काम गर्न पाएनौं भन्ने अवस्था छैन । प्रादेशिक तहको निर्वाचन परिणाम हेर्दा पनि प्रायः सबै प्रदेशमा एकमना सरकार नै बन्ने देखिन्छ । सङ्घीय सरकारको गठनका विषयमा दलहरूले गरेको एउटा सराहनीय काम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हो । विगतमा १ सय ८ भन्दा बढी दल निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जाने, सरकार गठन गर्न २५–२६ दलको सर्मथन लिनुपर्ने अवस्था थियो । सरकार गठन होस् या विघटन त्यसमा ठूला दल होइन कि एक सदस्यीय, दुई सदस्यीय साना दलहरू हाबी हुने स्थिति थियो ।
एक/दुई सिटको भरमा यसरी च्याँखे दल र तिनका नेताहरूले राजनीतिक अस्थिरतालाई पृष्ठपोषण गरेका थिए । अब त्यस्ता च्याँखे थाप्ने दल संसद्मा नभएपछि सङ्घीय सरकार पनि स्थायी रूपले बन्छ । संविधानले सरकार गठन भएको पहिलो २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र २ वर्षपछि प्रस्ताव ल्याउन पाइने तर केही गरी असफल भयो भने अर्को १ वर्ष फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जुन व्यवस्था गरेको छ, यसले यदि अस्थिरता नै आयो भने पनि ५ वर्षमा एक पटकभन्दा बढीको अस्थिरता नआउने भयो । ९ महीना वा १ वर्षमा सरकार परिवर्तन हुने विगतको अभ्यासको तुलनामा अब बन्ने सरकार स्थायी हुने भयो । त्यसैले अब बन्ने सरकारले साह्रै राम्रो कुरा सोचेको थिएँ, समयमा बजेट समयमा ल्याउन पाइनँ, काम गर्न पाइनँ, कार्यान्वयन गर्न पाइनँ भन्ने अवस्था रहँदैन । अब समृद्धिका गतिविधिहरू हुने भनेको मूलतः स्थायीय तहमा नै हो । दलहरूका आफ्ना केही स्वार्थ हुन सक्लान् । तर, अहिले राम्रो काम गर्न सकिएन भने ५ वर्षपछि आउने अर्को निर्वाचनमा हारिन्छ कि भन्ने डरले पनि जनप्रतिनिधिहरूमा विकास र समृद्धिको लागि काम गर्नुपर्ने हुटहुटी छ । त्यसकारण केही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र अबको एजेण्डा र कार्यदिशा भनेको आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो ।
संविधानतः मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । आर्थिक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ ?
समृद्धिको साथसाथै सङ्घीयता संस्थागत हुन सकेन भने समृद्धिमाथि आघात पुग्छ कि भन्ने शङ्का बाँकी नै छ । त्यो किनभने सरकारले सङ्घीयता संस्थागत गर्नका लागि १ वर्षमा जुन खालको तयारी गर्नुपर्‍यो, त्यो गर्न सकेन । अहिलेको संविधानले राज्य शक्तिलाई ३ तहमा विभाजन गरेको छ । यी तीनै तहका आफ्ना एकल, संयुक्त तथा साझा अधिकार र दायित्व पनि संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । साझा अधिकार र दायित्व व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपथ्र्यो, त्यो गठन हुन सकेन । त्यो त भएन नै, सरकारले स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारसँग सल्लाह नै नगरी केही विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्‍यो र केही पारित पनि भए र अहिले ऐनको रूपमा आएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा म त्यो ऐनबाट सन्तुष्ट छैन । मलाई लाग्छ यी ऐनबाट ती प्रादेशिक र सङ्घीय सरकारका कार्यकारीहरू पनि सन्तुष्ट हुन गाह्रो छ । किनभने स्रोतको विभाजन सही तरीकाबाट भएको छैन । मुलुकको समृद्धि र सङ्घीयता संस्थागत हुने भनेकै स्रोतको सही परिचालन र उपयोगले हो । स्रोतको परिचालन मैले आफ्नो ढङ्गले गर्छु, तिमीहरू मेरो निगाहामा टिक्नुपर्छ भन्ने खालका कानूनले सधैं स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय सरकारका बीचमा ‘टसल’ मात्र भइरहन्छ । त्यो कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपय मुलुकहरू विभाजनको सङ्घारमा पुगेका छन् । उदाहरणका लागि समृद्धिको उत्कर्षमा पुगेको, ज्यादै विकसित मुलुक स्पेनमा विभाजनका स्वरहरू सुनिए । बेलायतमा स्कटल्याण्डको विषयमा जनमतसङ्ग्रह नै भयो । यसकारण हामीले ३ ओटै तहलाई संविधानले दिएको अधिकारअनुरूप पर्याप्त स्रोत, उपयुक्त तरीकाबाट प्रयोग गर्ने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ । यसले सङ्घीयता संस्थागत गर्न सघाउ पु¥याउँछ । होइन भने स्रोतको प्रयोगमा एक निकाय र अर्को निकायबीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ । त्यसैले यस प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ । अर्को, अन्तरसरकारी समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधानअनुसार त्यो पनि गठन गरेर जानु पर्छ, जसले तीनओटै निकायबीच समन्वय गर्नेछ । अर्को, जे जति कानून बने ती कानूनहरूमा संशोधन गर्नु पर्नेछ भने पनि गर्नु प¥यो । भर्खर बनेका कानून हुन् भनेर बसेर भएन । जति बढी अधिकार तल दिइन्छ, सङ्घीय सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ । आखिर मुलुकले खोजेको विकास र समृद्धि हो । विकासबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ । विकासै नगरी समृद्धि प्राप्त त हुँदैन । यसो गरियो भने सङ्घीयता कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ ।
कतिपयले अब विकास निर्माण र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, समृद्धि आइहाल्छ भन्ने गरेका छन् । तपाईंको अनुभवले के भन्छ ?
म मूलतः दुईओटा राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछिको अवस्थाका बारेमा चित्रण गर्न चाहन्छु । पहिलो २०४८ पछिको परिवर्तन र दोस्रो २०६३/६३ पछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछिको परिवर्तन । ती दुवै परिवर्तनपछि जनतामा केही आशाहरू थिए, तर ती आशाहरूमा तुषारापात भयो । हामीबीच असफलता मात्र बाँकी रह्यो । त्यो असफलताको अनुभव ठूलो सम्पत्ति हो । अब बन्ने नयाँ सरकारले त्यो अनुभवलाई प्रयोग गर्न सक्छ । ४८ सालपछि बनेको सरकार एकमना थियो । बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने सम्भावना थियो । तर, सरकार आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफ्नै कारणले पतन भयो ।
अब अहिले सरकार बन्यो भने निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र लिएर गएका अब एउटै दल बन्ने भनेका दलहरूकोे गठबन्धनकै सरकार बन्ने हो । तर, निर्वाचनमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताविपरीत गठबन्धनमै कलह उत्पन्न भयो भने समस्या त्यहीँबाट नै शुरू हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक कलहलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसो गरिएन भने न हामी स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छौं, न त आर्थिक समृद्धिको यात्रा नै तय गर्न सक्छौंं । अर्को कुरा २०६२/६३ पछि सबै राजनीतिक दल तथा अर्थतन्त्रका खेलाडीहरूले अब सकारात्मक परिवर्तन भयो, अब हामी जनताका सबै काम गर्न सक्छौं भन्ने थियो । तर, हामीले त्यसपछिका १० वर्ष त्यसै गुजा¥यौं । जनताको आशामाथि फेरि तुषारापात भयो । अब अहिले सङ्क्रमणको अन्त भयो भनिएको छ । राजनीतिक दलहरूका मुद्दा, कार्यसूची फरकफरक हुँदा रहेछन् । तिनलाई सहमतिमा ल्याउन सकेनौं भने राजनीतिक सङ्क्रमण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौं नि । तर, विकास र समृद्धिका सबै काम सरकारले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । देशको विकास त आम नागरिकले गर्ने हो । सरकारले उसलाई विकासका लागि ठाउँ दिनुपर्छ । सरकारले त समन्वयकर्ता र नियमनकर्ताको रूपमा काम गर्ने हो । सरकार असल प्रशासन र न्याय दिने निकाय हो । अब बन्ने सरकारले विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर काम गर्‍यो भने निश्चित रूपमा हामी स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा लाग्न सक्छौं ।
मतपरिणामले अब केही दिनमै वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने देखिन्छ । अब बन्ने सरकारका मुख्य प्राथमिकताहरू केके हुनुपर्छ ?
वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा लामै गृहकार्यपछि संयुक्त घोषणापत्र तयार गरेको छ । त्यो घोषणापत्रमा अब गर्नुपर्ने कामको कार्यसूची राखिएको छ । इमानदारपूर्वक त्यहाँ उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता वा सूचीहरू कार्यान्वयन भए भने त्यतिले पनि पुग्छ । मैले अब बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकताको राजनीतिक कलह व्यवस्थापन हुनुपर्छ । त्यो गठबन्धनभित्र होस् या बाहिर । किनभने यदि दलहरूले कलहको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने मक्किने काम र कुशासन त्यहीँबाट शुरू हुन्छ । दोस्रो विधिको शासन । विधिको शासनले हरेक नागरिकलाई मैले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुराको बोध हुन्छ । र, नगर्ने काम गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट बोध हुन्छ । अहिले विधिको शासन नहुँदा नै अस्तव्यस्त भएको हो । तेस्रो, सार्वजनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण । नेपालमा गएका २६ वर्षमा धेरै सार्वजनिक संस्थाहरू यति पङ्गु भए कि तिनले जनतामा जे डेलिभरी गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनन् । कतिपय निकायको नेतृत्व कमजोर रह्यो भने कतिपय निकाय नै कमजोर रहे । त्यसकारण सार्वजनिक निकायहरूलाई बलियो बनाउनु पर्‍यो । निर्णय गर्न सक्ने र त्यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउनु पर्‍यो । यी निकायहरूको सबलीकरण जरुरी छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चुनौतीहरू पनि होलान् नि ? त्यति सहजै कार्यान्वयन हुने देख्नु हुन्छ ?
मानवीय क्षमता अकल्पनीय छ । विश्वमा थुप्रै नसोचिएका कुराहरू पनि सम्भव भएका छन् । यदि नेतृत्व इमानदार भएर लाग्यो भने अकल्पनीय भनिएका कामहरू पनि सम्भव भएका छन् । त्यो हामीले नजीकैका छिमेकीबाट पनि हेर्न सक्छौं । आजभन्दा ३५ वर्ष पहिले भोकमरी सहेको चीन आज कहाँ पुग्यो ? त्यसकारण सरकारमा इच्छाशक्ति भयो भने ती चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि जान सकिन्छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन कत्तिको सहज छ ? नेपालको अर्थतन्त्रले सङ्घीयता धान्न सक्छ ?
एउटा भनाइ छ, ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ तपाईंले गर्न चाहनु भयो भने स्रोतहरू फेला पर्छन् । हाम्रो जत्रै जनसङ्ख्या भएको तर हाम्रोमा भन्दा बढी कर्मचारी भएका मुलुकहरू पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन गरेका छन् । उनीहरू समृद्ध छन् । उदाहरणका लागि श्रीलङ्कालाई लिन सकिन्छ । अर्कोे कुरा, विगतको तुलनामा सरकारी कर्मचारीको समग्र पद सङ्ख्या हेर्ने हो भने अहिले कम छ । कर्मचारीतन्त्रको विकास खासै भएको छैन । त्यसैले मेरो विचारमा सङ्घीयता धान्नै नसकिने छैन । समृद्धिको काम नगर्ने, स्रोतको खोजी र परिचालन गर्न नजान्ने अनि सङ्घीयता धान्न सकिएन भन्नु ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भने जस्तो मात्रै हो ।